Mbupu bụ usoro azụmaahịa ebe gị, onye na -ere ahịa, enweghị ịchekwa ma ọ bụ ọbụna jikwaa ngwaahịa ọ bụla. Ndị ahịa na -enye iwu ngwaahịa site na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị, ị na -eme ka onye na -ebubata ngwaahịa gị mara. Ha, n'aka nke ha, na -ahazi ngwugwu, na -ebuga ngwaahịa a ozugbo na onye ahịa.
Onye Nrụpụta Ihe na Weebụ wepụtara onye ndu ọhụụ ọhụrụ, Etu ị ga - esi malite azụmaahịa na - ebubata ego. Akwụkwọ ntuziaka infographic na -eji ọnụ ọgụgụ na nyocha ọhụụ dabere na nghọta sitere n'aka ndị ọkachamara Dropshipping anyị gwara okwu. Nke a bụ ihe ọ na -ekpuchi:
Ngosipụta: Ana m eji njikọ mmekọ m maka ikpo okwu akpọrọ n'isiokwu a.